Reny Ejiptiana Miatrika Ny Famoràna Vehivavy, Mametraka ny Fanantenany Amin’ny Tanora · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraMenna A. Farouk
Voadika ny 19 Septambra 2016 7:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Nederlands, Español, Ελληνικά, English
Nadia Gama, 32 taona, ao amin'ny tranony ao amin'ny fari-pizaram-panjakan'i Ejipta any Minya. Sary nalain'i Menna Farouk.
Nadia Gamal, 32 taona dia niady mafy mba hiarovana ny zanany 10 taona, rehefa nanandrana nandrisika azy hamora ny zanany vavy 10 taona. Satria noforaina tamin'ny fahafito taonany i Galam, dia fantany tsara ny maha-zava-poana sy ny haratsian'ny famoràna ny vehivavy (FGM).).
Raha niresaka tamin'ny Global Voices i Galam, dia nilaza fa:
Halako ny fotoana namoràna ahy. Tena tsy misy ilàna azy, ary niteraka fanaintainana ara-batana sy ara-tsaina ho ahy. Izany no nanaovako tsia tamin'ny ray aman-dreniko rehefa naniraka ahy hamora ny zanako vavy izy ireo. Nilaza tamin'izy ireo aho, fa tsy havelako hahatsapa ny fanaintainana nasainareo niainako na oviana na oviana ny zanako. Tsy maintsy miova izany..
Noraràn'i Ejipta ny FGM tamin'ny taona 2008. Valo taona taty aoriana, nilaza ny mpikatroka mafana fo momba ny zon'ny vehivavy sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana fa niova ny fihetsiky ny reny manoloana ilay fomba ary nihena ny isan'ny ankizivavy voafora..
Koa satria efa tonga saina izy ireo ny amin'ny maha-loza sy ny maha-zava-poana ilay fandidiana, dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fanoherana ny FGM ireo reny tanora ao Ejipta.
Araka ny fFanarahana Maso Ny Isan'ny Mponina sy ny Fahasalamana ao Ejipta (DHS), 61 isanjaton'ny tovovavy eo anelanelan'ny 15 sy 17 taona tamin'ny 2014 no efa niaritra ny FGM, raha toa ka 74 isanjato tamin'ny taona 2008. Ny tahirin-kevitr'io fanadihadiana DHS io ihany no nampiseho ny fiovana lehibe tamin'ny toetsain'ny reny: raha 92 isanjato amin'ny reny rehetra no voafora, 35 isanjato amin'ireo vevivavy ao Ejipta monja no milaza fa mikasa hamora ny zanany vavy.
Sarotra ny nanafoana ny FGM nandritra ny taona maro noho ny fitambaran'ny faneren'ny fianakaviana, ara-kolontsaina sy fomban-drazana ary ara-pivavahana. Ny fomba fanao izay manala ny kitso sy ny faritra hafa amin'ny fivaviana dia eritreretin'ny olona maro any Ejipta ho fepetra iray hamolahana ny fanirian'ny vehivavy hanao firaisana ary hitandroany ny voninahiny. Samy ùanaraka io fomba fanao io ny Silamo sy ny Kristianina.
Na dia mety hitarika hatramin'ny fahaverezan-drà mety hitondra any amin'ny fahafatesana aza, ary mety hitarika olana isan-karazany, ara-batana sy ara-tsaina, dia mitohy hatrany ny FGM, indrindra fa any ambanivohitra sy ny faritra voahilikilika any Ejipta..
Na izany aza, ambaran'ireo mpikatroka mafana fo sy mpanaramaso fa mihena tsikelikely io fomba amam-panao tsy mety io, indrindra fa noho ny fanairana tsy mitsaha-mitombo amin'ireo taranaka tanora kokoa..
Reny Ejiptiana telo nandà ny hamora ny zanany vavy sy ny mpampivelona zokiolona Samiha Saeed 67 taona (eo ankavanana) izay nanatsahatra ny famoràna vehivavy rehefa avy nanatrika antsafa fampahafantarana maromaro nataon'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana tany amin'ny fari-pizaram-panjakan'i Ejipta any Minya. Sary nalain'i Menna Farouk.
“Mazava ho azy, hita ny fandrosoana miavaka,” hoy Randa Fakhr El Deen, tale mpanatanteraky ny ONG Mitambatra Hanohitra ny Fanao Mampidi-doza Amin'ny Zaza Amam-behivavy, tamin'ny Global Voices.
Nilaza i Fakhr El Deen fa mandray an-tànana ny andraikitra amin'ny fandàvana ity fomba amam-panao ity ireo reny tanora, na dia tsy izany aza no nitranga taona vitsy lasa izay::
Fahiny, ny reny no nitondra ny zanany vavy tany amin'ny dokotera na ny mpampivelona mba hotapahina ny fivaviany. Amin'izao fotoana izao, niova izany. Maro amin'ireo reny no mitsangana hanohitra io fomba io ary afaka foanan'izy ireo izany.
Tao anatin'ny folo taona lasa, ny fikambanan'i Fakhr El Deen, niaraka tamin'ireo vondrona tsy mitady tombontsoa sy ireo masoivohon'ny governemanta, dia nanamafy ny fanentanana fampahafantarana hanoherana ny FGM teny anivon'ireo reny, ankizy an-tsekoly, dokotera, Silamo avara-pianarana, ary ireo oloben'ny finoana Kristianina manerana ny firenena. “Ny atrikasa sy fanentanana fampahafantarana toy izany no tena mahavokatra amin'ny ady hanoherana io fomba fanao io” hoy Fakhr El Deen..
Tao amin'ny tanàna kely ao amin'ny Governoràn'i Minya, 245 kilometatra atsimon'i Kairo, hazavain'ny vondron'ireo reny tanora ny fomba nanoherany sy niarovany ny zanany vavy amin'ny fanerena ara-tsosialy mitarika amin'ilay fomba fanao – na dia ao anatin'ny fiaraha-monina tena mpandàla ny mahazatra aza izy ireo. Nolazain'izy ireo fa ny fanentanana fampahafantarana no antony lehibe indrindra.
Nitsangana niaraka tamin'ny rahavaviny i Laila Rashad, 35 taona, nanohitra ny reniny sy ny renibeny, izay nanizingizina ny hamoràna ny zana-drahavaviny. Tsy hitan'i Laila sy ny rahavaviny izay natao, nefa naheno i Laila fa hisy manampahaizana Silamo tena to-teny hitsidika ny tanàna hanao fanentanana fampahafantarana ny FGM izay karakarain'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ao amin'ny firenena.
Nanatrika ny iray amin'ireny fanentanana ireny Rashad tany aloha, ka nandre io manampahaizana io niteny fa ny FGM dia voararan'ny fivavahana. ” Nentinay ny reninay sy ny renibenay hanatrika ilay fanentanana fampahafantarana ary resy lahatra izy ireo”, hoy izy tamin'ny Global Voices. “Nohenoin'izy ireo ny torohevitr'ilay manampahaizana Silamo, ary tsy noforaina ny zana-drahavaviko”, hoy ny nambaran'i Rashad. Al-Azhar, manampahaizana sy mpitondra fivavahana kristianina, dia namerimberina fa ny FGM dia tsy didy ara-pivavahana, fa toy ny fahazarana efa nipetraka an-jato taonany maro.
Vivian Fouad, mpandrindra ny Fandaharanasa Nasionaly Manohitra ny FGM, miresaka amin'ny Global Voices ao amin'ny biraony ao amin'ny Filankevitra Nasionalin'ny Mponina. Sary avy amin'i Menna Farouk.
Vivian Fouad, mpandrindra ny Fandaharanasa Nasionaly hanoherana ny FGM dia milaza fa hanjavona tsikelikely ity fomba fanao ity amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fanentanana sy ny sazy henjana amin'ireo mbola manao azy.
Ny fampitsaharana ilay fomba fanao dia fehezin'ny lafiny ara-tsosialy sy toekarena maro, saingy ny fanjakana tàn-dalàna sy ny fomba amam-panao ara-tsosialy izay miovaova no hamarana ny zavatra tahàka izany.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nanamafy ny sazin'ny FGM ny parlemanta, tamin'ny fanitsiana ny andinin-dalàna izay manasazy ireo manao izany hatramin'ny 15 taona an-tranomaizina raha ankizivavy iray no maty, ary hatramin'ny fito taona monja raha nanao fandidiana. Ny fanitsiana ihany koa dia namerina nanasokajy indray ny FGM hiala amin'ny heloka maivana (izay matetika ireo meloka no mahazo hatramin'ny 2 taona an-tranomaizina) ho heloka bevava mahafaty, izay ibabena sazy sy famaizana henjana.
Ambaran'i Fouad fa ireo ONG sy ny governemanta dia mifantoka amin'ireo taranaka tanora kokoa amin'ireo fanentanany, satria ireo tanora no afaka miaro ireo zanany vavy amin'ny hoavy. Alohan'ny taona 2020, antenaina fa ny antsasaky ny vehivavy manodidina ny 15 taona sy ny 17 taona sisa no ho voafora.
“Mety ho taona maro no ilaina, fa tsy afaka ajanontsika ny ady manohitra ny FGM. Ary ny taranaka tanora no loha-laharana amin'io ady io,” hoy izy nanampy..